द्रुत उत्तर: Antm - BikeHike को एक साइकल 25 हुनेछ
द्रुत उत्तर: Antm को 25 चक्र हुनेछ
प्रकाशित अक्टोबर 29, 2021 By डन्ना
के ANTM बाट कसैको मृत्यु भएको छ?
Jays किन ANTM छोडे?
के Amanda Antm अन्धा भयो?
के एन्जेलिया प्रेस्टन मोडलिङ गर्दै हुनुहुन्छ?
जे म्यानुअल हिस्पैनिक हो?
मिस जय अहिले कहाँ छिन् ?
के ANTM प्रतियोगीहरूले भुक्तानी पाउँछन्?
के ANTM धाँधली भएको छ?
ANTM साइकल ३ कसले जित्यो?
टिफनीले ANTM मा के गरे?
ANTM All Stars कसले जित्यो?
ANTM 18 कसले जित्यो?
जय म्यानुअल भारतीय हो?
के Tyra बैंक विवाहित छ?
के श्रीमान र श्रीमती जय विवाहित छन्?
Tyra Banks को मूल्य कति छ?
ANTM को कति स्क्रिप्ट गरिएको छ?
ANTM कहिले समाप्त भयो?
के कुनै ANTM ले यसलाई ठूलो बनायो?
के कभरगर्लले ANTM को विजेता छान्छ?
के एन्जेलिया प्रेस्टनले ANTM जितिन्?
कसले अमान्डाको क्रिस्टल चोर्यो?
के त्यहाँ ANTM साइकल २१ हुनेछ?
Eva ANTM कति वर्षको हो?
Jay Alexander कति वर्षको हो?
अमेरिकाको अर्को शीर्ष मोडेलबाट ब्रिटनी कहाँ छ?
ANTM को कति चक्रहरू छन्?
Tyra Banks कति पुरानो हो?
ANTM को साइकल २० कसले जित्यो?
ANTM को साइकल 20 कुन वर्ष थियो?
Tyra Banks कति अग्लो छ?
Tyra Banks मेकअप कलाकार को हो?
ANTM बाट Mr Jay कुन राष्ट्रियता हो?
Jay Manuel कति अग्लो छ?
के Tyra को बच्चा छ?
के Tyra Banks को मान्छे छ?
टायरा र एरिक कहिले डेटिङ सुरु गरे?
निगेल बार्कर कोसँग विवाहित हुनुहुन्छ?
अमेरिकाको नेक्स्ट टप मोडेलको साइकल २५ एउटा आगामी साइकल हो जुन २०१९ मा कुनै समय VH25 मा प्रिमियर हुने अनुमान गरिएको थियो। २०२० सम्म कुनै आधिकारिक घोषणा गरिएको छैन। हाउस अफ द ड्र्यागन ट्रेलर - द लूप। साइकल 1 मूल च्यानल: VH2019 प्रिमियर: TBA साइकल जानकारी न्यायाधीशहरू: Tyra Banks।
2016: Kimberly Rydzewski (साइकल 10) को डिसेम्बर 19, 2016 मा मृत्यु भयो। उनी 29 वर्षकी थिइन्। 2018: डिसेम्बर 4, 2018 मा Jael Strauss (cycle 8) को स्टेज 34 स्तन क्यान्सरको कारण4वर्षको उमेरमा मृत्यु भयो।
ANTM बाट बाहिरिने निर्णय, उनले भने, "100%" उनको थियो। म्यानुएलले व्याख्या गरेझैं, उनले अमेरिकाको नेक्स्ट टप मोडेलको १८ चक्र पछि आफूलाई फेला पारेको बाटोबाट आफ्नो करियरलाई "भिन्न दिशामा" सार्न समय आएको महसुस गरे।
स्वाफोर्डको परिवार उनको बाल्यकालमा प्लानो, टेक्सासमा बसाइ सरेको थियो। स्वाफोर्ड कानूनी रूपमा अन्धा छ; उनी रेटिनाइटिस पिग्मेन्टोसाबाट ग्रसित छिन्, एक विकृत आँखा अवस्था। स्वाफोर्डले भनेकी छिन् कि यो अवस्थाले उनलाई 30 वर्षको उमेरमा पूर्ण रूपमा अन्धो बनाउनेछ।
एन्जेलिया प्रेस्टन एक अमेरिकी फेसन मोडेल हुन्, जो ANTM मा प्रतियोगीको रूपमा तीनवटा उपस्थितिका लागि परिचित छन्। उनी 12, 14 र 17 चक्रमा देखा पर्‍यो।
गत बुधबार, ई को एक एपिसोडमा! न्यूज पोडकास्ट जस्ट द सिप, म्यानुएलले पहिलो पटक आफ्नो जातिको बारेमा सोच्ने प्रशंसकहरूलाई सम्बोधन गरे। अनुमानको बावजुद, उनले स्पष्ट गरे कि उनी ल्याटिनो होइनन्। उहाँ वास्तवमा दक्षिण अफ्रिका र बिरासियलबाट हुनुहुन्छ - एक काला अभिभावक र एक गोरा संग।
अलेक्ज्याण्डर वा मिस जे, एक अमेरिकी रियलिटी टेलिभिजन व्यक्तित्व र रनवे कोच हुन् जो अमेरिकाको नेक्स्ट शीर्ष मोडेलमा आफ्नो कामका लागि परिचित छन्। उनी फेसन र मोडलिङ उद्योगका लागि व्यापक रूपमा यात्रा गर्छन्। अलेक्जेन्डर पेरिस र न्यूयोर्क शहरमा बस्छन्।
ANTM प्रतियोगीहरूले प्रति दिन $ 40 स्टाइपेन्ड प्राप्त गरे उनी भन्छिन् कि प्रत्येक केटीलाई "खानामा लाग्ने प्रति दिन $ 40 स्टाइपेन्ड दिइयो, तर त्यो मात्र पैसा हो जुन हामीले शो गर्न पाएका छौं। सारा हार्टशोर्न पर्दा पछाडि के भयो भनेर खुलासा गर्ने एएनटीएम एलम मात्र होइनन्।
प्रायजसो, मानिसहरूले धेरैजसो रियलिटी टेलिभिजन कार्यक्रमहरूलाई निर्माताहरूद्वारा निर्मित र स्क्रिप्ट गरिएको आशा गर्छन्। तर, अमेरिकाको नेक्स्ट टप मोडलको हकमा त्यस्तो थिएन। अचम्मको कुरा, शो पटक्कै पटकथा गरिएको थिएन, त्यसैले तपाईले देख्नु भएको सबै कुरा स्वाभाविक रूपमा भयो।
Eva Marcille Pigford (साइकल 3) त्यसपछि: सबैभन्दा अविस्मरणीय ANTM प्रतियोगीहरू मध्ये एक, Pigford ले 2004 मा तेस्रो चक्र जित्यो।
टिफनी रिचर्डसन4मा ANTM को साइकल 2005 मा एक प्रतियोगी थिइन्, जहाँ उनी रेबेकासँगै डबल एलिमिनेशनमा बाहिर थिइन्। शीर्ष मोडेलको इतिहासको सबैभन्दा अविस्मरणीय क्षण, उनी टायरा बैंकहरूलाई उनको उन्मूलनमा यति धेरै रिसाउनको लागि परिचित छिन् कि बैंकहरूले उनलाई चिच्याउन थाले।
म्यानुएलको जन्म स्प्रिंगफिल्ड, इलिनोइसमा इटालियन र चेक वंशको आमा र मिश्रित केप मलाय वंशका दक्षिण अफ्रिकी बुबाको रूपमा भएको थियो।
Tyra Banks उचाइ5ft 10 in (1.78 m) टेलिभिजन अमेरिकाको अर्को शीर्ष मोडेल Tyra Banks Show America's Got Talent FABLife Dancing with the Stars Partner(s) Erik Asla (2013–2017) बच्चाहरु 1।
जे आफ्नो प्रेम जीवनलाई गोप्य राख्ने झुकाव राख्छन्, तर यस क्षणमा, फेसन लिजेन्ड र पूर्व टिभी व्यक्तित्व लाइभ र्‍याम्प अपका अनुसार एकल जीवन बिताएको देखिन्छ। आफ्नो रोमान्टिक जीवनको बारेमा बन्द भए तापनि, जे नियमित रूपमा LGBT अधिकारहरूको लागि खुला रूपमा समलैंगिक व्यक्तिको रूपमा वकालत गर्दछ।
सेलिब्रेटी नेट वर्थका अनुसार, २०२० सम्म टायराको अनुमानित नेटवर्थ $९० मिलियन छ।
17) अन्य रियालिटी शोहरूको विपरीत, ANTM स्क्रिप्ट गरिएको छैन।
अप्रिल 10, 2018।
ANTM मा अधिकांश प्रतियोगीहरूले आफ्नो क्यारियर फ्लप देखे, तर त्यहाँ कोही थिए जो Tyra श्रापबाट बचेका थिए र कार्यक्रममा आए पछि सफलता पाए। अमेरिकाज नेक्स्ट टप मोडलले मोडलिङ प्रतियोगिताको शो भएको दाबी गरे पनि यो शृङ्खलाबाट धेरै थोरै शीर्ष मोडलहरू देखा परे।
त्यहाँ अमेरिकाको नेक्स्ट शीर्ष मोडेल: बुधवारको फाइनलदेखि सबै ताराहरू वरिपरि धेरै विवाद भएको छ, र पूर्व प्यानल न्यायाधीश जेनिस डिकिन्सन मात्र चुपचाप छेउमा उभिएका छैनन्। "कभरगर्लहरू हुन् जसले मोडेल छनौट गर्छन् - कुनै पनि न्यायाधीश होइन।
त्यो सिजन राम्रो चट्टान सुरु भए तापनि, प्रेस्टनले उनलाई हरेक हप्ता चुनौतीहरूको सामना गर्न ल्याइन्, र सिजन फाइनलमा, उनी विजेताको ताज पहिरिए।
आपराधिक मास्टरमाइन्ड-एडनेसको अन्तिम कार्यमा, इभा द थिवाले अमान्डाको क्रिस्टल लिन्छ र प्रमाण लुकाउनको लागि यटको छेउमा फालिदिन्छ।
विल जार्डेल 21 मा ANTM को साइकल 2014 मा प्रतियोगी थिए। उनी उपविजेता थिए।
उनले एटलान्टा, जर्जियाको क्लार्क एटलान्टा विश्वविद्यालयमा भाग लिइन्; यद्यपि, उनले १९ वर्षको उमेरमा अमेरिकाज नेक्स्ट टप मोडेलको तेस्रो सिजन जितेको केही समयपछि विद्यालय छोडिन्।
६३ वर्ष (१२ अप्रिल, १९५८)।
ब्रोवरले LA मा नेक्स्ट मोडल म्यानेजमेन्ट, सान फ्रान्सिस्कोमा पासपोर्ट र रिल व्यवस्थापनसँग हस्ताक्षर गरेको छ। 2019 को रूपमा, उनी TNG मोडलहरूमा साइन इन भइन्।
अमेरिकाको नेक्स्ट टप मोडेलका सबै २४ "चक्रहरू" (उर्फ सिजनहरू) पुन: हेर्नको लागि तपाईंलाई समय दिनको लागि सामाजिक दूरी जस्तो केही छैन, ती सबै अब अमेजन प्राइममा उपलब्ध छन्।
४७ वर्ष (डिसेम्बर ४, १९७३)।
2013 अमेरिकाको अर्को शीर्ष मोडेल मूल नेटवर्क CW मूल रिलीज अगस्त2- नोभेम्बर 15, 2013 एपिसोडहरूको सिजन कालक्रम सूची।
मेकअप कलाकार जे म्यानुअलले 2012 मा अमेरिकाको नेक्स्ट शीर्ष मोडेल हिट प्रतियोगिता शोबाट टाढा भएदेखि टायरा बैंकहरूसँगको आफ्नो सम्बन्धको बारेमा खुलासा गर्दैछन्।
जय म्यानुअल / राष्ट्रियता।
योर्क बैंक्स Asla।
जब उनी "डान्सिङ विथ द स्टार्स" होस्ट गरिरहेकी छैनन् र उनको मोडलल्याण्ड थिम पार्क खोल्न काम गरिरहेकी छिन्, टायरा बैंक्सलाई उनको प्रेमी लुइस बेलेन्जर-मार्टिनसँग भेटिएको छ।
बैंकको आमा बन्ने सपना नर्वेजियन फोटोग्राफर एरिक अस्लासँग पूरा भयो। दुवैले सन् २०१३ मा डेटिङ सुरु गरेका थिए र २०१६ मा छोराको जन्म भएको थियो ।
क्रिस्टन बार्कर्म। सन् १९९९।
प्रश्न: के हामी Antm साइकल 24 को लागि Tyra फिर्ता पाउन सक्छौं?
द्रुत उत्तर: Antm साइकल 19 कसले जित्छ
प्रश्न: Antm साइकल 21 कसले जित्छ
प्रश्न: Antm साइकल 22 कसले जित्छ
प्रश्न: एन्टीएम साइकल १ कसले जित्यो
प्रश्न: कसले 20 Antm साइकल जित्यो
कसले जिते एन्टीएम साइकल १३
द्रुत उत्तर: Antm साइकल 10 कसले जित्यो
प्रश्न: Antm साइकल 18 कसले जित्छ
द्रुत उत्तर: Antm साइकल 11 कसले जित्छ
अघिल्लो पोस्ट: प्रश्न: टेस्टोस्टेरोनको एक चक्रले तपाईंलाई चोट पुर्याउँछ
अर्को पोस्ट: द्रुत उत्तर: Nyc मा तपाइँ कुन होटेलहरू बल ड्रप देख्न सक्नुहुन्छ
कसरी संदिग्ध संगमरमर मर्मत गर्ने भोक नगर्नुहोस्
द्रुत उत्तर: मार्बल मूर्तिकला कसरी मर्मत गर्ने भोक नराख्नुहोस्
कसरी डुङ्गा मर्मत गर्ने भोक नराख्नुहोस्
भुकम्प मर्मत नगर्नुहोस्
प्रश्न: छत मर्मत नगर्नुहोस् पुरानो मा सौर्य छत राख्नुहोस्
द्रुत उत्तर: पुस्तकालयका पुस्तकहरू मर्मत नगर्नुहोस्
प्रश्न: किनारामा ग्रेनाइट मर्मत नगर्नुहोस्
ती पातहरूलाई माटो मर्मत नगर्नुहोस्
कम्प्याक्ट मर्मत पहुँच डाटाबेस हुँदा प्रयोगकर्ता त्रुटि सन्देश प्रम्प्ट नगर्नुहोस्
द्रुत उत्तर: केनमोर एलिट कम्प्रेसर मर्मतको लागि श्रम तिर्नुहोस्
प्रतिलिपि अधिकार © 2021 BikeHike।